Sith မော်ကွန်းတိုက်၏လက်စားချေ - Brick Fanatics
အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ
LEGO သည်ကြီးမားသောအမှားတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရှောင်ရှားခဲ့သည် classic Star Wars အစုံ
18 / 08 / 2021 18 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 205 Views စာ0မှတ်ချက် 7261 ကိုယ်ပွား Turbo Tank, 9526 Palpatine ရဲ့ဖမ်းဆီး, နတ်သမီး, Hasbro, ကရှီးယား, Lego, Lego Star Wars, Lucasfilm, တပုဒ် Hidalgo, Palpatine, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
မင်းသိလား? ဟိ LEGO Group ၎င်း၏မူလ line-up အတွက်ကြီးမားသောအမှားတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည် Star Wars: ကလဲ့စားချေ
04 / 06 / 2021 04 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 552 Views စာ0မှတ်ချက် Starkiller အခြေစိုက်စခန်းအပေါ် 75236 Duel, Mustafar အပေါ် 75269 Duel, 75283 သံချပ်ကာတိုက်ခိုက်ရေး Tank (AAT), 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, Mandalore အပေါ် 75310 Duel, 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း, Ahsoka, Ahsoka Tano ဖြစ်သည်, Dartဇ Maul, Lego, Lego Star Wars, မင်ဒဲလား, Maul, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, Star Wars, Star Wars: အဆိုပါ Clone စစ်ပွဲများ, အဆိုပါ Clone Wars
Sith's Boga of Revenge ကဘာတွေ LEGO ပုံရသလဲ Star Wars 2021 ခုနှစ်တွင်သတ်မှတ်ထား?
05 / 05 / 2021 05 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 448 Views စာ0မှတ်ချက် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ, 7255 အထွေထွေပြင်းထန်သော Chase, 75040 အထွေထွေ Grievous '' ဘီးစက်ဘီး, တည်ဆောက်, အထွေထွေ Grievous, hachiroku24, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Lego, Lego တည်ဆောက်, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego Star Wars, Marvel, မိုက်ခရို, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, Spider-Man, Star Wars, Star Wars: အ Sith ၏လက်စားချေ, YouTube ကို
အစဉ်အဆက်အဘယ်အရာကိုအံ့ဩ Star Wars: Sith's Boga ၏လက်စားချေမှုသည် ၂၀၂၁ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော LEGO တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ တစ်ခု
Classic prequel trilogy ပာသင်္ဘော LEGO အတွက်ပြန်လည်ရောက်ရှိ Star Wars မဂ္ဂဇင်း
27 / 04 / 2021 27 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 935 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၅၀၃၉ V-Wing Starfighter, A- တောင်ပံ Starfighter, မီဒီယာချက်ချင်း, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်း, Obi-Wan ရဲ့ Jedi ကြားဖြတ်, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, Star Wars, လည်စည်းဗုံးခွဲ
ယခုလတရားဝင်တရားဝင် LEGO ၏ထုတ်ဝေ Star Wars မဂ္ဂဇင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပထမဆုံးသောလက်စားချေခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်
29 / 03 / 2021 29 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 909 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၅၀၃၉ V-Wing Starfighter, patကရာဇ် Palpatine, မီဒီယာချက်ချင်း, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, Star Wars, Star Wars စစ်မြေပြင်
29 / 03 / 2021 29 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1027 Views စာ0မှတ်ချက် 4479 လည်စည်းဗုံးကြဲလေယာဉ်, 75291 မရဏစတားနောက်ဆုံး Duel, patကရာဇ် Palpatine, Lego, Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, Star Wars, V- တောင်ပံတိုက်လေယာဉ်
29 / 03 / 2021 29 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1034 Views စာ0မှတ်ချက် Mustafar အပေါ် 75269 Duel, နတ်သမီး, Benny Safdie, Bonnie Priesse, Disney, Disney+, Ewan လို့ McGregor, Hayden christensen, ယောလ Edgerton, Lego, Lego Star Wars, Obi-wan kenobi, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, ဆီမွန် Kessell, Star Wars, Star Wars: Clone ၏တိုက်ခိုက်မှု
LEGO ၏ပြ69နာ XNUMX Star Wars မဂ္ဂဇင်းတွင်patကရာဇ် Palpatine minifigure ပါဝင်သည်
28 / 01 / 2021 28 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 1096 Views စာ0မှတ်ချက် 75291 မရဏစတားနောက်ဆုံး Duel, patကရာဇ် Palpatine, မီဒီယာချက်ချင်း, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, Star Wars, အဆိုပါ Mandalorian, TIE ကြားဖြတ်
LEGO ၏နောက်ပြissueနာ Star Wars မဂ္ဂဇင်း၌ 75291 Death Star မှအခမဲ့patကရာဇ် Palpatine minifigure ပါဝင်သည်